ओलीलाई ‘अ'ल्पज्ञानी’ भन्ने बाबुरामलाई रामेश्वरले दिए क'डा जवाफ ! ओली तीनछक, -
ओलीलाई ‘अ’ल्पज्ञानी’ भन्ने बाबुरामलाई रामेश्वरले दिए क’डा जवाफ ! ओली तीनछक,
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै ओलीलाई ‘अल्पज्ञानी ‘को संज्ञा दिएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्,-‘प्रम केपी शर्मा ओलीको ३ घण्टाको स्पष्टीकरण सुन्दा उहाँमा आफ्ना क’मीकमजोरी स्वीकार्ने र सच्चिने कुनै छाँटकाँट देखिएन ।
को’रोना, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रका व्याख्यान सुन्दा अ’ल्पज्ञान र अ’हंकारको भ’यंकर क’कटेल देखियो । लिपुलेक नक्साको ब्याज भजाएर अ’कंटक कुशासन चलाउने र देशलाई ब’र्बादीमा लैजाने बुझियो ।’ बाबुरामको ट्वीटले सामाजिक सन्जालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आएका छन्।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बाबुरामलाई जवाफ दिंदै ट्वीट गरेका छन्- ‘एउटा कुरा के बुझियो भने अरुलाई अल्पज्ञानी भन्ने मान्छे स्वयम अल्पज्ञानी हुने हुँदो रहेछ। तर आफु अल्पज्ञानी भएको भेउ पाउँदैन। यो बुझेपछि म अल्पज्ञानी छु भनेर सोच्दा आनन्द आयो’